နှင်းလျောစီးပါတီ: World Tour | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » နှင်းလျောစီးပါတီ: World Tour
နှင်းလျောစီးပါတီ: World Tour APK ကို
စျေးကွက်အပေါ်မရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးစနိုးဘုတ်စီးခြင်းဂိမ်းသရဖူဆောင်း, နှင်းလျောစီးပါတီအားလုံးသင့်ရဲ့ adrenaline ဒီအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောနောက်ဆက်တွဲအတွက်လိုအပ်ကြောင်းဖြည့်ဆည်းဖို့နောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ကအချိန်-တိုက်ခိုက်မှုပြိုင်ပွဲ mode ကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းနှင့် 21 ထူးခြားသောနေရာများတွင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်ကျင့်သုံးပါ။ သင့်ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် Hop နှင့်ဖျားနာ combo ဆင်းသက်နှင့်မြင့်မားသောရမှတ်များထိန်သိမ်းဖို့သင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ!
အွန်လိုင်းဦးဆောင်သုံးပြီးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအွန်လိုင်း multiplayer mode ကိုသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုမြင်းစီးသူရဲကို အသုံးပြု. သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ Play ။ , 150 အဆင့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အောင်မြင်မှုများကိုကျော်ဖြည့်စွက်အတှေ့အကွုံရဖို့နဲ့ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်နှင့်အဆင့်မြင့်ရမှတ်များအောင်မြင်ရန်ရန်သင့် attribute တွေ upgrade ။
ထိုကဲ့သို့သောဖုတ်ကောင်, ဂြိုလ်သား, ပင်လယ်ဓားပြများနှင့်အများအပြားကပိုအဖြစ်သီးသန့်အရေခွံအပါအဝင်ကျော် 80 မတ်မတ်တစ်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးမြင်းစီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။ သစ်ကိုလျှို့ဝှက်ကြီးတွေခေါင်းကို mode ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေပါ။ သင်ယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်တစ်ဦးအပိုအစွန်းပေးရန်သင့်ဘုတ်အဖွဲ့ Upgrade ။ သင့်ရဲ့မြင်းစီးသူရဲရဲ့စွမ်းရည်ဖြည့်စွတ်ကြောင်းထူးခြားသောကျန်တာတွေနှင့်အတူ 50 ပျဉ်ပြားတစ်ရွေးချယ်ရေးကနေရွေးချယ်ပါ။
နှင်းလျောစီးပါတီ2အထူးကိုအကောင်းဆုံးစနိုးဘုတ်စီးခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသင့်မိုဘိုင်းဟာ့ဒ်ဝဲအဘို့အ optimized လာမယ့်မျိုးဆက် 3D ဂရပ်ဖစ်ပါဝင်သည်။
တတ်နိုင်သမျှအမြန်အတွေးများ၏အဆုံးရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ လှည့်ကွက်ကွပ်မျက်သငျသညျအပိုမြန်နှုန်းကိုပေးမည်နှင့်စစ်ဆေးရေးဂိတ်သင်ပိုမိုအချိန်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပျောက်ဆုံးနေအလံသင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရမှတ်ထဲကနေအချက်များနုတ်ပါလိမ့်မယ်။
အလွတ်အပေါငျးတို့သလှည့်ကွက်တွေအကြောင်းပါ! အဆိုပါမြင်းစီးသူရဲတို့သည် sickest လှည့်ကွက်ဖျော်ဖြေဖို့ထိုကဲ့သို့သောသံလမ်း, ခုန်, သေတ္တာများ, မှတ်တမ်းများ, ကျောက်ဆောင်နှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအခြားအအရာဝတ္ထုအဖြစ်ကိုသဘာဝနဲ့လူလုပ် features တွေကိုအသုံးပြု!
Go ကြီးတွေသို့မဟုတ်အိမ်ပြန်! Big လေကြောင်းပြိုင်ပွဲမြန်နှုန်းမြင့်မှာဆင်ခြေလျှောဆင်းနေစဉ်မြင်းစီးအကြီးအကျယ်ခုန်ပေါ်လှည့်ကွက်လုပ်ဆောင်ဘယ်မှာပြိုင်ပွဲဖြစ်ကြသည်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး halfpipes အချို့ဆင်းစဉ်လှည့်ကွက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ဆောင်ရွက်ပါ။ ပိုပြီးမှတ်ရဖို့နဲ့ပိုကောင်းတဲ့ရမှတ်အောင်မြင်ရန်တတန်းအတွက်ကွင်းဆက်မျိုးစုံလှည့်ကွက်။
တစ်ဦးနှင်းလျောစီးစစ်တိုက်ခြင်းငှါသင်၏မိတ်ဆွေများကိုစိန်ခေါ်မယ်နှင့်ရဲ့ baddest လှည့်ကွက်ဆင်းသက်နိုင်သူကိုမြင်ရပါစေ! Twitter ပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏ရလဒ်များကိုဝေမျှမယ်နှင့်ဝါကွှား။
16 နှင်းလျောစီးအကြားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါနှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံးဂီယာရွေးချယ်ရာတွင်သင့်ရဲ့ preference ကိုမှသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီကိုစိတ်ကြိုက်။ သင်သည်သင်၏မြင်းစီးသူရဲရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ဖြည့်ဖို့ခွင့်ပြုကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်ဒီဇိုင်းများကနေအထိပျဉ်ပြား၏တစ်ဦးကဧရာစုဆောင်းခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
50 ထူးခြားတဲ့ကျွမ်းကျင်ဖို့လှည့်ကွက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ရာပေါင်းများစွာကျော်။ သငျသညျကိုသှားအဖြစ်စတင်ရန်သင်ခန်းစာနှင့်တိုးတက်မှုကိုလိုက်နာပါ။ အချို့အထင်ကြီးမြင့်မားသောရမှတ်တက်ထိန်သိမ်းအတွေ့အကြုံကိုရရှိနှင့်ကိုယ်အဘို့နာမည်တစ်ခုဖြစ်စေခြင်းငှါနဲ combo နဲ့လှည့်ကွက်ပာ execute ။
ရရှိနိုင်အများဆုံးဂိမ်း controllers နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။
•အားလုံးနောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးသည်နှင့်မြင့်မားသော resolution display များအတွက် optimized ။
•အွန်လိုင်းသင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်အခြားမြင်းစီးဆန့်ကျင်ကစားရန်အွန်လိုင်း multiplayer mode ကို။
• 50 ထူးခြားတဲ့လှည့်ကွက်ကျော်လေ့လာပါနှင့်ပေါင်းစပ်ရာပေါင်းများစွာဖန်တီးပါ။
•ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ကြီးမှာတည်ရှိပါတယ် 21 သင်တန်းများအပါအဝင်စီးကြီးမားတဲ့နေရာများတွင်။
•သင့်မြင်းစီးသူရဲရဲ့စာရင်းဇယားများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်သင့်ဘုတ်အဖွဲ့ Upgrade ။
•အတှေ့အကွုံရဖို့နဲ့သင့်အကြိုက်ဆုံးနှင်းလျောစီးရဲ့ attribute တွေ upgrade လုပ်ဖို့မကြာခဏ Play ။
• Twitter ပေါ်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သင်၏ရလဒ်များကိုမျှဝေပါ။
• Templeton Pek, နစ်မြုပ် Alaska, ကျနော်တို့ Outspoken, Phathom, စွဲလမ်း, သစ်တော်နှင့် Curbside ၏အသံကနေသီချင်းတွေကို featuring တိုးချဲ့တေးသံ။
• In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို အသုံးပြု. အတွေ့အကြုံကိုအချက်များကိုသို့မဟုတ်အထူးပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်နိုင်ခြင်း။
•ရရှိနိုင်သောအောက်ပါဘာသာစကားများ: အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, ဂျာမန်, အီတလီ, စပိန်, ရုရှား, ဂျပန်, ကိုးရီးယား, ပေါ်တူဂီနှင့်တရုတ်
🏂 Facebook တွင်နှင်းလျောစီးပါတီအသိုင်းအဝုိင်းကို Join !: http://bit.ly/snowfacebook
နှင်းလျောစီးပါတီ: World Tour
482.68 ကို MB
မေပယ်မီဒီယာ LLC ။